Faayilii - Naannoo daangaa Turkii fi Siiriyaati milishoonni Aysiis alaabaa isaanii fannisanii oggaa deebi'an
Manni Murtii Federaalaa Yunaaytid Isteets, dhimma dargagoota hidda Sumaalee han lammii Ameerikaa ta'anii sadi'ii, Aysiisitti dabalamuudhaa lafa jala hojjaachaa turan jedhamanii himatamanii torban lammaffaa dhaa laalaa jira.
Mohaammad Faarah fi Abdurahhman Daawud , dargaggota oggaa 22ti. Guleed Omaar immoo oggaa 21. Manni murtii himannaa dargaggoota kanaratti baname dhugaa ta'uu hoo mirkaneeffate, hidhaa oggaa 15tii amma du'aatti itti murteesisuu danda'a. Isaan garuu yakka akkanaa hin hojjanne jdhan.
Dargaggoota himataman kanarratti wabii ta'e han dhihaate hiriyaa isaanii han ture dargaggoo oggaa 20, Abdulahii Yusufi, . Inni akka jedhutti isaantu finxaaleyyii Islaamaa (Islamic Radicalism) wajjin wal isa barsiise. Inumtuu loltuu ISIS ta'ee gara Siriyaa deemudha isaa xiyyaara qabachuudha deemu to'anna jala olfame. ISIStti makamuudha deemaa jirachuu isaas amaneera.
Haati himatamaa Guleed Omaar, Faadumoo Husseen garuu, wabiin kun fudhatama hin qabuu jeti,. Faadumoo Hussein Raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa Afaan Somaaliiratti, " Biiroon Qorannoo Sadarkkaa Federaalaa (FBI) dargaggoota addaan qoqqoodudhan walirratti kakaasaa jira jedheen amana jette.
Saadiq Waarfaa gamtaa mirga dhala namaatii falmuu namoota hidda Somaalee qabanii lammii Ameerikaa ta'anii irraammoo, “hawaasni keenyaa huddii himatameera jechuu miti. Namni himatamees amma yakka himatameen san hojjachuun isaa mirkaneeffamuutti qulqulluu ta'uu isaa seeri hin dubbata,” jedheera.
Himanni jara sadeen irratti baname , dargaggoonni kun bitootessa bara 2014 qabee amma Ebla 2015ti, akkata itti Siiriyaa dhaqanii garee shororkeessaatti makamanii faluudhaa walgahaa turu fi odoo isaan kararra hin bu'in irra gahamuu ibsa. Dhimmi kun torban lamaan dhufuuf mana murtiitti lallama tura.
Dhimma Dargaggoota Sumaalee Lammii Ameerikaa Sadi’ii Han Loltuu Aysiis Ta'uudha Karoorfatan Jedhamanii
Itti Gaafatamaa Milishoota ISIS Paaris, Faransaayitti nama 124 Ficcisiisee ya ijeesan
Iraaqi gargaarsa USA itti argattee loluma loltee Ramaadii ISIS irraa deebifattee alaabaa ufiillee keessatti dhaabatte